Forum American Latin ah oo ku saabsan qalabka lama huraanka ah ee Maareynta Magaalooyinka - Geofumadas
Forum Latin Latin ah oo ku saabsan qalabka la taaban karo ee waxqabadka magaalooyinka
Janaayo, 2013 Baridda CAD / GIS, Maamulka Land
Barnaamijka loogu talagalay Latin America iyo Caribbean ee Machadka Lincoln ee Sharciyada Guryaha ayaa ku dhawaaqaya kulankaan muhiimka ah, kaas oo lagu qaban doono Quito, Ecuador. 5 ilaa 10 ee May ee 2013.
Ururkan oo lala kaashaday Bankiga Jamhuuriyadda ee Jamhuuriyadda Ecuador, wuxuu ujeedkiisu yahay in uu faafiyo, la wadaago, lana qiimeeyo qalabka la taaban karo ee faragelinta magaalooyinka la horumariyey oo si wax ku ool ah loo hirgeliyey magaalooyinka Latin America. Waa nooc ka mid ah qalabka 20, qaar iyaga ka mid ah oo aan la garanayn oo lagu xushay shuruudaha ku haboon inay saameyn ku yeeshaan arimaha muhiimka ah, jiritaanka qiimeyn qeexan iyo suuragalnimada dib-u-kicinta qaybaha kale ee gobalka.
dhiirogelin asalka ah, waayo, qorshahan waa aasaaska jiritaanka (iyo fulinta wax ku ool ah) alaabtii oo saameeya arrimo muhiim ah in ajandaha dadweynaha magaalooyinka gobolka. More muhiimsan, qaar ka mid ah alaabta, kuwaas oo aan had iyo jeer ka war roona magaalooyinka (ama go'aan guud ahaan), tusaale ahaan, shahaadooyinka of Construction dheeraad ah la fili karo (CEPAC), wax ku ool ah loo isticmaalo ee São Paulo. alaabtii kale si siman muhiim ah, inkasta oo ay si fiican u yaqaan, laga yaabee waa qasdin bedelan yahay 4 midkood nacayb ama khaldan oo ku saabsan shuruudaha la taaban karo ee ay fulinta, sidoo kale muujiyey by tabarruc ah ee horumar.
Qalabka sharci, maaliyadeed iyo maamul ayaa la falanqeyn doonaa, taas oo saameyn doonta maareynta dhulka iyo jaangooyaha, xuquuqda horumarinta, isugeynta danaha bulshada, maamulka qiimaha hantida maguuraanka ah, isticmaalka nidaamyada xogta juqraafiyeed, hagaajinta xaafadaha, tallaabooyinka gaarka ah ee horumarinta magaalooyinka, hantida dadweynaha ee dalka, canshuurta hantida, iyo joogtaynta isbedelka isticmaalka dhulka, iyo kuwo kale.
Kulanku wuxuu isku-dubaridaa casharrada si cajiib ah loogu soo bandhigo qalabyada, oo ay ku xigto koorsooyin yar-yar oo la bixiyo isla mar ahaantaana, si ay uga qaybgalayaashu u helaan fursad ay ku sii xoojiyaan qaybaha aragtida iyo hawlaha qalab kasta. Kulamada iyo koorsooyinka yaryar labadaba waxaa lagu bari doonaa khabiirada Laatiin Latin ah oo leh khibrad la aqoonsan yahay oo ku saabsan qalabka waxqabadka magaalada.
Hawlaha waxaa loogu talagalay mas'uuliyiinta, saraakiisha iyo farsamooyinka dawladaha hoose, gobolada iyo qaran ee Latin America ee ku lug leh qaabeynta iyo hirgelinta qalabka faragelinta iyo maamulka siyaasadaha dhulka, iyo sidoo kale tacliinta jaamacadaha iyo farsamoyaqaannada ururada aan dowliga ahayn. xukuumadda, iyada oo leh xiiso iyo waayo-aragnimo ku saabsan waxyaabaha ku jira guddiga.
Mowduucyada laga doodayo waa:
Ka qayb qaadashada horumarinta
Gaadiidka dhulka iyadoo la marayo kanaalada maaliyadeed iyo sharciyeynta
Soo celinta hantida raasumaalka ee dhismaha xuquuqda
Isdhexgalka bulshada ee magaalooyinka
Aqoonsiga dadweynaha ee xuquuqda mudnaanta
Tallaabooyin ka hortag ah oo aan rasmi ahayn
Bixinta dhul loogu talagalay guryaha bulshada5
Waxqabadyo by wakiilada gaarka ah
Kala-duwanaanshaha canshuurta guryaha
Hanti la wareegidda si loo helo guryaha bulshada
Codsiyada online waxay u furan yihiin Janaayo 25 iyo February 18 oo waa in lagu sameeyaa laba qaybood. Qeybta koowaad waxaa laga sameeyaa bogga koorsada:
Forum Forum Qaybta 1
iyo midka labaad ee isku xirka goonida ah:
Forum Forum Qaybta 2
Waxaa looga baahan yahay in la buuxiyo labada qaabba iyadoon loo eegin haddii aad rabto inaad kaqaybqaadato shirarka ama shirarka iyo koorsooyinka yaryar.
Wixii macluumaad dheeraad ah, la xiriir:
Post Previous«Previous Taas oo dib u soo celisa GEO5 qaybta 15
Post Next Shahaadada Master ee Qorshaynta Muuqaalka ee UNAHNext »